online မင်းသား: စိတ်ကြိုက် flash သီချင်းများ
စိတ်ကြိုက် flash သီချင်းများ
အချစ်ဆုံးလေး..ဖြူ ပြော-အောင်လ ချစ်တယ်..ဟုတ်- Bunny phyo နားနားဘေးမှာ-လွမ်းပိုင် မင်းပြန်လာမဲ့နေ. ရိုးမြေကျ-ရဲလေး onlineချစ်သူ ညီမလေးအတွက် ဟုတ်လို.လား-ဆိုတေး မင်းတစ်ယောက်သာ ကလေးရယ် မမေ့ရက်နိုင်တဲ့အကြောင်းများ တမ်းတခြင်း ခေါက်ပစ်လိုက် မိုးတိမ်ကဗျာ နင်နဲ.ငါ..သူငယ်ချင်း မင်းအနားမှာနေချင်တယ် အလွမ်းပြေအနမ်း အရာရာမင်း မင်းလေးသိဖို. ပုံရိပ်လေး ဥမ္မာလီဇာ တယ်လီဖုန်း ဆုတောင်းပြည့်ချင်တယ် ဒီအတိုင်းလေးချစ်နေမယ်-အောင်လ over you
နင်နဲ.ငါနဲ.သူငယ်ချင်း ဘိုင့်ဘိုင် သမီးလေး baby အချစ်လို.ခေါ်သလား-ထူးအယ်လင်း
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 03:15
ဓာတ်ပုံ နဲ့နောက်ခံသီချင်းထားပြီးအခွေထုတ်ချင်ရင် ...
ကိုယ့်ရဲ. laptop ပျက်သွားရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ.......
ကိုယ့်ရဲ. blog လေးမှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်ကြည့်သွားလဲ...
online ပေါ်မှာကိုယ်မရှိတဲ့အချိန် ပို.လာတဲ့ mail တွေ...
Gtalk အကောင့်ကို မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဖျက်ပစ်လို...
ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲကို ဘယ်သူတွေ ၀င်မွှေသွားလဲ စစ်ကြည...
Skin လှလှလေးနဲ. Gtalk
Gtalk မှာလိမ်လည်နေသူများကို ရှာဖွေနည်း
MP3 player လေးတွေလုပ်ချင်ရင်...
android ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း